Qaramada Midoobay: Trump yuusan ka bixin heshiiska nukliyerka - BBC News Somali
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay madaxweyne Donald Trump inuusan ka bixin heshiiska caalamiga ah ee looga hortgayo in Iran ay yeelato hubka nuliyerka.
Madaxa Qaramada Midoobay oo la hadlayay BBC-da wuxuu sheegay in khatar loogu jiro inuu dagaal dhaco waa haddii la dhowri waayo heshiiskii quwadaha caalamka ka dhexeeyay iyo Iraan ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyerka sanadkii 2015-kii.
Madaxweyne Trump ayaa si wayn uga soo horjeeday heshiiska oo xaddidayo in Iran ay kobciso barnaamijkeeda nukliyerka si ay ugu baddalato in cunoqabatayntii saarnayd laga qaado.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa la filaya in 12-ka Bishan May uu go'aan ka gaaro heshiiska Iraan.
Xoghayaha guud ee Jimciyadda Qaruumaha ka dhexeyso Guterres ayaa ka dhawaajiyay in heshiiskii Iran la galay uu ahaa 'guulo muhim oo dublumaasiyadeed' islamarkaasna aan la jebinin.
Wuxuu intaasi ku daray " Haddii laga baxo heshiiska waa in la hello qaabab kale oo waxtar leh"
Heshiiskii nukliyerka ma burburi karaa?
Maalmo ka hora yay ahayd markii Israa'iil ay shaaca ka qaaday xog qarsoodi ah oo ku eedeynayso xukumadda Tehraan inay si qrsoodi ah u ballaarinayso barnaamijkeeda nukliyerka.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo wuxuu sheegay in xogta Israa'iil ay caddayn u tahay in heshiiskii la galay Iran uu ku dhisna 'been'.
Dalalka kala ah Faransiiska, Ingriiska iyo Jarmalka ayaa isku raacay in lasi wado heshiska nukliyerka taasina ay tahay qaabka ugu habboon ee Iran looga horjoogsan karo inay ballaariso barnaamijkeeda atoomikada.
Muxuu ku saabsanaa heshiiska?
2015-kii, Iran waxay heshiis la gashay dalalka kala ah Mareykanka, Shiinaha,Ruushka, Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska taaso laisku afgartay in Iran ay joojiso hoowlaha samaynta nukliyerka lagana qaado cunaqabataynta dhaqaale.
Heshiiska waxaa kale kamid ahaa in Iran ay yarayso maaddada Uraaniam-ka sii loo joojiyo heerka bacriminta nukliyerkeeda. Goobahaasi waxay kala yihiin Fordo iyo Natanz.
Kormeerayaal kaso socday ha'yadda Atoomikada ayaa loo diray goobaha nukliyerka Iran si ay xaaladda usoo indho-indheeyaan.
Maxay ku anddocoonaysay Israa'iil toddobaadkani?
Isniintii, Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa daboolka ka qaaday xog ka koobnayd dowr bog oo sheegayso Iran ay weli sii waddo haggaalinta barnamijkeeda nukiyerka.
Netanyahu wuxuu sheegay in ciidammada sirddoonka Israa'iil ay xogta kasoo uruuriyeen xarun lagu sameeyo nukliyerka oo ku taallo magaalada caasimadda ee Tehraan.
Xogta ay shaaca ka qaaday Israa'iil ayaa ka kobnayd illa 55,000 bog oo macluumad oo xasaasi ah lagusoo qoray oo ay kamid tahay Iran inay wadday samaynta illa shan kamid ah gantaallada xambaara madaxyada nukliyerka oo kiiba uu qaadayo 10 kilo oo tan oo hubka TNT ah.
Macluumadka uu soo saaray sirddoonka Israa'iil ayaa sido kale lagu sheegay in Iran ay sii samaysanayso hubka nukliyerka kaddib markii la burburiyay mashruuca sanadkii 2003-dii.
Image caption Goobaha la sheegay in Iran ay kasii waddo barnaamijkeeda nukliyerka
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa su'aal geliyay dadaalada Mareykanka iyo Faransiiska ay ku doonayaan inay wax ka beddalaan heshiiskii nukliyerka.
Ruuxaani wuxuu ka shanqariyay in Iraan aysan aqbali doonin wax kasto caqabad ku a dadaaladeeda ay ku raacayso heeshiisyada caalamiga sanadaha nagu soo aadan.
Wuxuu ku eedeeyay Madaxweyne Trump inuu si sharci darro ah uu jebinayo heshiiska.
Si kastaba, dowladda Iran ayaa ku adkaysanaysaa in ganataalladii ay tijaabisay horraan aan loogu talogelin inay xambaaran nukliyerka balse ay barnaamijkeeda nukiyerka ay u isticmaalayso inay ka dhaliso korontada.